Ushe wangqongqa nendlu owaseGomora | News24
Ushe wangqongqa nendlu owaseGomora
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaUMnu Mlungisi Basi ekhomba labo kade becosha khona amathambo nezicubu zalowo oshonile.
USATHUKILE umphakathi wasendaweni yaseGomora ngaphansi kuka-ward 23 ngemuva kokuba kushe owesilisa wangqongqa nendlu ngezintathakusa zangoMgqibelo mhla zingama-29 kuNhlangulana (June).
UMnu Jabulani Shoba (25) nobengowokudabuka e-Underberg kuthiwa ushe wangongqa endlini yakhe laphokade eqashe khona kwaphinde kokheleka nezinye izindlu ezinhlanu ezingomakhelwane wakhe nazo ezishe zangqongqa.
Ngokuthola kwe-Echo uMnu Shoba kuthiwa ufike endlini lapho kade eqashe khona ngesikhathi zehora lesithathu entathakusa ephuma ukuyozijabulisa.
Ufike wacela ikhandlela kamakhelwane kwazise ugesi ubungekho kule ndawo njengoba uhlupha vele.
Ungene endlini wakhanyisa ikhandlela ngoba ethi ufuna ukubona kodw ikhandlela kwaba ilona eseligcina liyimbangela lokushona kwakhe.
UNks Nombuso Mchunu nobakhelene noMnu Shoba uthe abawuzwanga umlilo ngesikhathi uqala.
Uthe bezwa umsindo kungathi kuyagqekezwa babe sebe yavuka.
“Ngemuva kwaloko kwanuka intuthu sabe sesizwa into eqhumayo sazitshela ukuthi hlampe intambo kagesi kodwa sabuya sakhumbula ukuthi ugesi awukho. Ngemuva kwaloko sabona intuthu sathi uma siyaphuma sabona amalangabi eseqhamuka endlini yakhe. Sizamile ukumvulela umnyango sithi siyamsiza ukuthi aphume kodwa umnyango ubukhiyiwe ngaphakathi.
“Sazama ukushaya umnyango sithi siyawuvula kodwa ubungavuleki kunaloko uvele utsheka. Kwenzeka konke loku nje uJabulani ubekhala ngapahakathi ecela usizo. Ngesikhathi ku ngathi umnyango uyavuleka ubevutha amalangabi izindla zona sezingasekho. Sathi siyamubamba singaphandle siyamudonsa wavela wawela phakathi emlilweni washa waze waphela kwasala amathambo,” kubeka yena.
Uthe nabo bashelwe izimpahla kanye nendlu ngenxa yalesi sigameko. Uthe namanje usathukile kanti nasebusuku kusanzima nanokuthi alale ngenxa yento ayibonile.
“Bengiqala ukubona into enje ukuthi umuntu ashe aze aphele nje ingekho into esizomsiza ngayo. Ngisho ebusuku kusenzima ukulala ngoba ngisezwa ngisho ilizwi lakhe ememeza ecela usizo.”
Amanye amalunga omphakathi akhulume ne-Echo athi asathukile nawo ngoba uma kungukuthi indaba yenkinga kagesi ayilungiswa kuzoqhubeka kube khona izigameko ezifana nalezi.
UNks Janet Zwane uthe into eyenza ukuthi abantu baze bakhanyise amakhandlela ingoba bahlushwa inkinga kagesi. Uthe ugesi uyahamba izinsuku bengenawo nokube sekubaphoqa ukuba basebenzise amakhandlela.
“Akukona okokuqala ukuba kwenzeke isigameko esifana nalesi kulendawo. Khona la kulona leligceke kunomama naye owashona ngendlela efanayo washa wangqongqa nendlu kade ekhanyise ugesi ngoba sihlushwa ugesi. Asifuni ukuthi kuphinde kube khona izigameko ezifana nalezi ezizophinda zenzeke manje siayecelwa ukuba silungiselwe ugesi ukuzigwema,” kubeka yena.
Elinye ilunga lomphakathi uMnu Mlungisi Basi uthe : “Ibuhlungu lento esiyibonile ukuthi sibone umuntu eshona ngesihluku esingaka. Umuntu okade eyingane elungile ezisebenzela ondla umndeni wakhe futhi ezihloniphela.Uma kungukuthi ayilungiswa indaba kagesi kusho ukuthi sizophela siqedwa imililo,” kubeka yena.
Ikhansela lakule ndawo uMnu Dumisani Phungula uthe bayazwelana kakhulu nemindeni elahlekelwe ikakhulukazi labo abalahlekelwe ilunga labo lemindeni.
“Sicela umphakathi onogesi nalabo ongenawo ukuba uqaphele kakhulu manje udba lwemililo njengoba sekuyisikhathi sasebusika.
“Sizocela osomabhizinisi abanozwelo kanye noMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu ukuba ulekelele kuleyomindeni ethintekile ekuyakheleni izindlu ezintsha,” kuphetha yena.